Nimcada Ilaah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waxaan dhawaan arkay fiidiyowga dhigaya inuu ganacsato TV-ga ganacsiga. Xaaladdan oo kale waxay ku saabsanayd CD CD Christian khiyaali ah oo cinwaankiisu yahay "Waa Dhammaan Waxyaabaha igu Saabsan". CD-ga waxaa ka mid ahaa heesaha: "Sayidow Magacayga kor baan ugu qaadayaa", "Waan isa sarraysiiyaa" iyo "Ma jiro mid aniga la mid ah". (Ma jiro qof aniga oo kale ah). La yaab leh? Haa, laakiin waxay muujineysaa runta murugada leh. Innagu bani-aadamku waxay u muuqdaan inaynu nafteenna ...
Mararka qaar waxaan maqlaa walaacyo aan culeys badan saarayno xagga nimcada. Sida sixitaanka lagu taliyay, ka dib waxaa lagu doodi karaa, inaynu miisaan culus u nahay barista nimcada, waxaan tixgelin karnaa in addeecid, cadaalad, iyo waajibaadka kale ee lagu sheegay Qorniinka, iyo gaar ahaan Axdiga Cusub. Qof kasta oo ka walwalaya "nimco badan" ayaa leh walaac sharci ah ...
Dhammaan wadiiqooyinka oo dhami Ilaah bay u horseedaan? Qaar ayaa aaminsan in diimaha oo dhami ay kala duwanaan karaan isla mowduuca - samee tan ama taas oo jannada aada. Jaleecada hore, waxay umuuqataa habkaas. Hinduuga wuxuu u ballan qaadayaa midnimada qofka rumaysta ah oo ah ilaah aan shakhsi ahayn. Galitaanka nirvana wuxuu ubaahan yahay shaqooyin wanaagsan inta lagu gudayo dhalmada badan. Buddhism, oo sidoo kale ballanqaaday nirvana, ayaa dalbanaya in afarta rukun oo sharaf leh iyo waddada sideed-jirka loo maro ...
Billy Graham wuxuu inta badan u adeegsaday muujinta inuu dadka ku dhiiri geliyo inay aqbalaan madaxfurashada aan ku haysanno Ciise: Wuxuu yiri, "Kaalay sidaad tahay oo kale!" oo isagu weli wuu na jecel yahay. Yeedhku "imow sidaad tahay oo kale" waa mid ka tarjumeysa ereyadii rasuul Bawlos: "Sababtoo ah Masiixu wuxuu annaga noo dhintay markii aan weli itaal yarayn. Well ...
Naxdin nimco run ah waa fadeexad. Nimcadu ma saamaxayso dembiga, laakiin waxay aqbashaa dambiilaha. Waa qayb ka mid ah dabeecadda nimcada oo aynaan mudnayn. Nimcada Ilaah ayaa nolosheena beddela oo waa waxa iimaanka Masiixiyiintu ku saabsan yahay. Dad badan oo la soo xiriira nimcada Ilaahay ayaa ka baqaya in sharciga ka hooseynin. Waxay u maleynayaan inay tani ka dhigeyso inay sii dembaabaan. Aragtidaas Paul ayaa ahayd ...
Weli waxaa jira dhowr toddobaad illaa aan u dabaaldegno dhimashada iyo sarakicidda Ciise. Laba waxyaalood ayaa nagu dhacay markii Ciise dhintay oo la sara kiciyey. Midda koowaad waa inaan isaga la dhintay. Tan labaadna waxay tahay in isaga la innaga soo sara kiciyey. Rasuul Bawlos sidan ayuu u dhigay sidan: «Haddii hadda laydinla soo sara kiciyey Masiix, raadiya waxa sare, meesha Masiixu joogo, oo fadhiya midigta Ilaah. Raadso waxa sare, ma aha waxa dhulka jira. ...
Markii aan dhageysanayay heesta Billy Joel ee "State of Mind New York" toddobaadyo yar ka hor intii aan baarayay wararkeyga internetka, ayaan si kadis ah u arkay maqaalka soo socda. Waxay sharraxaysaa in gobolka New York uu dhowaan meel mariyay sharci mamnuucaya tattooing iyo duurjoogta. Waxay ii noqotay wax aan ku bartay inaan barto in sharci sidan oo kale ahi muhiim yahay. Sida muuqata, dhaqankan ayaa noqday mid isbeddelaya. Waxaan ka shaki qabaa in ...
Intaan aniga iyo Tammy ku sugaynay garoon diyaaradeed oo garoonkeenna diyaaradda ah muddo yar, waxaan arkay nin dhalinyaro ah oo fadhiya laba kursi oo dhawr jeer ila eegaya. Dhowr daqiiqo ka dib, wuxuu i weydiiyay, "Waan ku faraxsanahay, miyaad tahay Mr. Joseph Tkach?" Wuxuu ku faraxsanaa inuu ila hadlo oo wuxuu ii sheegay in dhowaan laga eryey bulshada Sabatariyiinta. Wadahadalkayagu wuxuu ku socday ...